Tartan Qur’aan akhris ah oo lagu soo gabo gabeeyay Gaalkacyo – Radio Muqdisho
Tartan Qur’aan akhris ah oo lagu soo gabo gabeeyay Gaalkacyo
Munaasabadan oo lagu soo geba gebeynayaay tartan Qur’aan akhris ah oo muddo todobaad ah magaalada Gaalkacyo uga socday ilaa 41 arday oo ka kala socotay degmooyinka gobolak Mudug ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo, ayadoo ay ka qeyb galeen mas’uuliyiin, waalidiin iyo marti sharaf kale kaasi oo ay soo qaban qaabisay mu’asasada Alminhaaj oo kashanaysa shirkadda NEPCO.
Ugu horeyn waxaa munasabada ka hadlay Maxamed Siciid Muuuse guddoomiyaha mu’asasada Al-minhaaj ee Gobolka Mudug waxaana u sharaxay taranka & iyo qeymaha uu ku fadhiyo
“Xafladan sidaad la socotaan wax ay gabogabo u tahay tartankii mudada isbuuc ah masaajidka Ramadaan oo lagu dhigayey gobolka Mudug, waaa tartan sanad la’ah oo sanad waliba lagu qabto Gaalkacyo” ayuu yiri Maxamed Saciid.
Maxamuud Yuusuf Ciise oo hadal ka jeediyeey munaasabada waxaa uu ku baaqay in laga qayb qaato wax barashada dadka reer miyiga ah.
“Culimada iyo dadka Diinta baranaya iyo kuwii horey u bartay, waxaan usoo jeedinayaa inay ka qayb qaataan hay’adaha ammaanka dalka iyo hay’adaha cadaaladda, waxaan aamin sanahay hadii ay nabad ka qayb qaataan in la helaayo cadaalad iyo nabad gelyo.
Maareeyaha Guud ee shirkada NEPCO ayaa sheegey inay tartankan & kii ka horeeyayba ay dhaqaale ku bixiyeen, kan kalena ay bixinayaan hadii rabi idmo
“Anigoo ku hadlay magacii shirkadda board-ka ayaan u gudbinay, waxaan balan qaadayaa inaan sanadka dambena masharuucan aan hirgalino waxaan mu’asasada ka codsanaynaa inaysan cidkale nagasiin” ayuu yiri Guddoomiyuhu.
Aadam Maxamed Cigaal maamulaha Jaamacadda Bariga Afrika oo afka culimada ku hadlayay ayaa sheegey inay samaynayaan Jamciyad ilaalisa lana socota macalimiinta, Qur’aanka dhigayay dugsiyada hoos yimaada Jimciyada Al-minhaaj & kuwa la xiririaba.
Gunaanadka xaflada ayaa waxaa shahaado sharaf la guddoonsiiyay maamulka shirka xoogga korontada ee NEPCO iyo ardaydii halkaasi ku tar tamaysay
By Kaamil Cabdiqaadir Jaamac Galkcyo
Labo musharax oo isugu soo hartay wareegga ugu dambeeya ee doorashada
Maxamed Xaashi Cabdi oo ku guuleystay Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug